Rarama hupenyu hwako uye kanganwa zera rako. - Jean Paul - Quotes Pedia
Kana iwe uchida kurarama hupenyu hwako uchifara, usafunge nezvezera rako. Iwe unofanirwa kufunga kuti zera iri hachisi chinhu asi nhamba. Vazhinji vedu vanofarira kufunga kuti zera rine zvakawanda zvekuita kana zvasvika pakunakidzwa nehupenyu hwako.
Huye, isu tinorarama pasi pekusanzwisiswa kuti hatigone kuongorora zvakasiyana zvehupenyu hwedu kana tikakwegura. Asi kana iwe wakazvipira zvakakwana, hapana anogona kukutadzisa kurarama hupenyu hwako sekuda kwako. Chinhu chimwe chete chaunofanirwa kuve nechokwadi ndechekuti wakasimba mupfungwa kurarama hwako hupenyu hwakavakirwa pane zvaunokoshesa.
Zvese zvinoenderana nepfungwa dzako uye kugona kwepfungwa. Kana iwe uine hukama hwakasimba hwepfungwa, iwe unogona kuzadzisa chinangwa chaunoda chehupenyu, kunyangwe kana wakura. Zera rako harizokanganise chinangwa chehupenyu hwako. Chinhu chete chiri kuenda kukubatsira kuzadzisa chinangwa chako ndicho chishuwo chako.
Zvakanaka, isu tinokwanisa kunzwisisa kuti zera rine chinhu chakakosha kuita kana zvasvika kune zvekugona kwemuviri wako. Ichokwadi chinhu chinozivikanwa kuti iwe ucharasikirwa agility uye simba izvo zvawaimbove nazvo pakutanga hupenyu.
Nekudaro, sezvatakambotaura, kana chishuwo chako chakasimba uye uine kugadzirira kwepfungwa kuti uite chinangwa chako, hapana anogona kukukonesa kubva pane izvozvo. Zvese zvaunofanirwa kuita kuzvigadzirira pachako nepfungwa, uye unozopupurira kuti iwe uzere nekuvimba uye nesimba.
Zvakanaka, kana iwe uchikwanisa kuchera kunze zvishoma, iwe uchaona kuti kune yakawanda mienzaniso apo vanhu vakura vakawana tarisiro yechishuvo chavo. Saka gara uchiedza kuzvichengetedza, uye zvinokubatsira iwe kusvika pachinangwa chako chaunoda. Iwe usave neshungu nezvezera rako sezvo ichingova nhamba.
Kuwana Old Quotes
Kuwana Vakura Quotes Kurudziro
Great Quotes Kurarama Na
Kukura Vakura Quotes
Hupenyu Hunokosha Quotes
Hupenyu Hwapfupi Quotes
Rarama Mune Iyo Moment Quotes
Rarama Hupenyu Quotes Pfupi
Simba Quotes Nezve Hupenyu
Quotes Pamusoro peKweguru Uye Uchenjeri